Ajụjụ - Shanghai Chigong Industrial Co., Ltd.
SCIC ọ bụ onye nrụpụta?
Ee, SCIC bụ onye nrụpụta njikọ njikọ gburugburu maka ihe karịrị afọ 30 maka ijere ahịa China yana ahịa esenidụt na ngwa ntụtụ na mbuli elu & ngwa rigging. Anyị guzobere SCIC ugbu a iji kwalite ahịa mba ụwa iji nye ndị ahịa gburugburu ụwa ezigbo ọrụ na nka.
Kedu ụdị ngwaahịa nke SCIC na -emepụta na -eweta?
Anyị bụ ọkachamara n'ịme ụdọ njikọ gburugburu nke ọkwa dị elu na ike maka ụlọ ọrụ na -egwupụta coal Armored Face Conveyors (AFC), Beam Stage Loaders (BSL), igwe nkụnye eji isi mee okporo ụzọ, yana agbụ njikọ dị larịị; anyị na -eme Grade 70, Grade 80 na Grade 100 agbụ maka mbuli na ịgbachi agbụ (sling chain), igwe mbuli elu na ụlọ ọrụ ịkụ azụ.
Ị na -edobe nnwale na ụlọ nyocha na usoro nyocha zuru oke?
Ee, anyị na -eme nnwale ụlọ gụnyere ule nrụpụta ike, nnwale ike, charpy V notch mmetụta ule, nnwale nnwale, nnwale tensile, nnwale siri ike, nyocha na -enweghị mbibi (NDE), nyocha nnukwu na nyocha obere, nyocha mmewere, wdg. , dabere na DIN 22252, ụkpụrụ DIN EN 818 na ihe ndị ahịa chọrọ.
Ị na -eme ODM na OEM?
Ee, site na igwe anyị akpaaka na robotized na ndị injinia nwere ahụmịhe, anyị nwere ike ịme ODM na OEM njikọ njikọ gburugburu na nkọwa ndị ahịa.
Ị nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu (MOQ)?
Maka onye ahịa nke ịtụ ahịa mbụ, enweghị MOQ chọrọ, anyị nwekwara obi ụtọ ịnye ọnụọgụ mgbanwe maka iji nnwale nnwale ndị ahịa.
Kedu ihe yinye / mkpuchi gị na -emecha?
Anyị na -enye mkpuchi mkpuchi agba dị iche iche maka ihe ndị ahịa chọrọ, yana galvanization na ụzọ ndị ọzọ iji mechaa otu mkparịta ụka.
Kedu ihe nkwakọ ngwaahịa agbụ gị pụtara?
Anyị na -enye ụzọ nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, gụnyere akpa jumbo, mkpọ, pallets, okpokolo agba, wdg.
Kedu ihe bụ njiri mara mma na nkwa gị?
Anyị na -enye akụkọ nyocha zuru oke na foto maka nyocha onye ahịa n'oge nrụpụta yana tupu nnyefe iji gosipụta ntọhapụ na nnyefe. N'ọnọdụ ọdịda ọ bụla n'oge ọrụ njikọ njikọ njikọta anyị, anyị ga -ekwenye na onye ahịa na nyocha ọdịda (gụnyere nyocha) iji chọpụta ihe kpatara ya na mkpebi kwesịrị ekwesị maka nghọta na nnabata.